ကွန်းခိုရာ: “ အဖော်ညှိကြသူများ...."
တက္ကစီပေါ်မှ ဆင်းကာ ချိန်းထားတဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးရှေ့ ရောက်လာချိန်အထိ တွေ့ ရင်ကောင်းမလား ၊ မတွေ့ ရင်ကောင်းမလား နဲ့ ဝေသွယ်ချီတုံချတုံဖြစ်နေဆဲ ....မနေ့ က ၃ခါကြီးများတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါလို့ ပြောနေတဲ့ ဟန်နီ့ကို အားနာလို့ သာ လာခဲ့ရ ပေမယ့် တကယ်ဆို ကျောင်းမှာတုန်းကမေဂျာတူအတန်းတူဆိုပေမယ့် ဝေသွယ် နဲ့ဟန်နီ က သိပ်တွဲမိတာတော့မဟုတ်ပါ။
ဟန်နီတို့အုပ်စုက တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသားသမီးတွေမို့ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ကျောင်းလာပြီး ငွေကိုရေလို သုံးနိုင်ပါသည်။အမြဲတမ်း သူတို့ နောက်မှာ တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေလည်း တရုန်းရုန်းပါ။အပေးအကမ်းရက်ရောတဲ့ သူဌေးသမီးလေး ဟန်နီ့ကို မြှောက်ပင့်ညာစားနေကြသူတွေ ထဲမှာ ဝေသွယ်မပါခဲ့ ပါ။ ဟန်နီ ဟာသူ့ ကို မြှောက်ပင့်ပြောရင်သိပ်ကြိုက်တတ်ပေမယ့် သဘောကောင်းပြီးလူတကာကိုခင်မင်တတ်ပါသည်။
ဝေသွယ် က လည်းဟန်နီ့ တို့ လောက် မချမ်းသာပေမယ့် အိမ်မှာ ကုန်စုံဆိုင် ကြီးရှိပြီး အတန်အသင့် တော့သုံးနိုင်ပါသည်။ ဒီတော့ ဝေသွယ်လည်း ကိုယ့်အဆင်းနဲ့ ကိုယ် လင်းနေတဲ့ ကြယ်လေးမို့ လမင်းကြီးလို ၀င်းပနေတဲ့ဟန်နှီ့ နားသိပ်မနေပါ၊ ပြီးတော့ ဟန်နီ့ လို ၀ိုင်းဝိုင်းလည်မနေပေမယ့် အဲဒီတုန်းကတော့ ဝေသွယ့်မှာလည်း ယှက်သွယ်နေတဲ့သံယောဇဉ်ကြိုးလေးနဲ့ပါ…
အို …. ဒီအကြောင်းတွေ ပြန်မတွေးချင်ပါ ၊ လုံးဝကို သတိမရချင်ပါ။
ဝေသွယ့် ရဲ့မျှော်လင့် ချက်အိပ်မက်တွေပျက်စီးသွားလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ နှလုံးသားထဲ က အနာဟောင်းဟာအကင်းမသေသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ အိမ်အလုပ် ၊ ဆိုင်အလုပ် တွေ နဲ့ချာချာလည်ကာ ၆ နှစ်တာခရီးကို ဖြတ်သန်းရင်းအပျိုကြီးဒေါ်ဝေသွယ်ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျောင်းပြီး ကတည်းက ဟန်နီနိုင်ငံခြားထွက်သွားတာတော့ သိလိုက်ပေမယ့် ဘာသတင်းမှထပ်မကြားရတော့တာ ခုထိပါပဲ။
အရင်အပတ်ကမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟန်နီ က သူ့ ကိုဖုန်းဆက်ပါသည်။သူဖုန်းနံပါတ်ကို နေခြည့် ဆီက ရတာတဲ့ ။သူ နိုင်ငံခြား ကပြန်လာပြီတဲ့ ..ခုလောလောဆယ် ဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့ ဖို့နေခြည် ၊ သရဖီ တို့ လည်းချိန်းထား တယ်တဲ့ …
လူချင်းသိပ်မတွေ့ ဖြစ်ပေမယ့် နေခြည် နဲ့ သရဖီ့ သတင်းတွေတော့ဝေသွယ်ကြားပါသည်။
နေခြည်က အစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုမှာ လက်ထောက်ညွှန်မှူးတောင်ဖြစ်နေပြီ တဲ့။ ခုထိအိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ နေခြည်က ကျောင်းမှာကတည်း ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ အနားကပ်မခံတဲ့ ခပ်စွာစွာ ၊ ခပ်ထက်ထက် မိန်းကလေးပါ ။
သရဖီ တစ်ယောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်တုန်းက မင်္ဂလာပွဲ ကိုဖိတ်ပေမယ့်ဝေသွယ်မသွားဖြစ်ခဲ့ ပါ။့ သရဖီ ကအေးဆေးသိမ်မွေ့ ပြီးရှက်တတ်ကာ ဟန်နီ နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက်ပါ။တူတာတစ်ခု ကတော့ ဟန်နီ့ လိုပဲ သရဖီလည်း ငေးကြည့် ရအောင်ချောမောခြင်းပင်…ဒါပေမယ့် သရဖီ့ အလှက မြင်သူရင်အေးစေပြီး ဟန်နီ့ အလှက နှင်းဆီနီတပွင့် လို တောက်ပစူးရှခဲ့တာပါ။
ခုတော့ အဲ့ ဒီနှင်းဆီနီ ဘယ်လိုပုံဖြစ်နေမှာပါလိမ့် …
အတွေးတွေနဲ့ အတူ သီးသန့် ခန်းလေးထဲလှမ်းဝင်လာတော့စားပွဲမှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်နေရင်း ဝေသွယ့်ကို ပြုံးရယ်ကြိုဆိုနေ သည့်ဟန်နီ့ကို တွေ့ ရပါပြီ။ မဟူရာရောင်တဆက်တည်းဂါဝန်ရှည်လေး ၀တ်ထားတဲ့ ဟန်နီ က အရင်လိုပါပဲလား… ၆ နှစ်တာ ခရီးဖြတ်သန်းပြီးပေမယ့် ကျောင်းတုန်းကလို လှပချောမောတုန်းပါပဲ…ဒါပေမယ့် လည်တိုင်ကျော့ မှာ တဖျတ်ဖျတ်လင်းလက်နေတဲ့စိန်လည်ဆွဲ လေးနဲ့ ဆန့် ကျင်ကာ သူ့ မျက်ဝန်းတွေ မှိန်ဖျော့ နေပါလား… ။
“ ဟန်နီရေ.. နင် အရင်အတိုင်း လှနေတာပဲနော် ”
“ မတွေ့ ရတာ ၆ နှစ်တောင်ရှိပြီသူငယ်ချင်းရယ် ၊ နင် တော်တော်ပြည့်လာတာပဲနော် ၊စိတ်ချမ်းသာနေတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လား ”
“ ပြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာ ၊ ၀ လာတာပါ ၊ငါ လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲကိုနေတာ ၊ ၀ချင် ၀ တော့ဆိုပြီး ”
“ ဟယ်..အဲ့ လိုတော့မလုပ်နဲ့ လေ ၊ မိန်းမဆိုတာဘယ်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ်လှလှပပလေးနေရမှာပေါ့၊ ဘာလဲ နင့်ချစ်ချစ်က ၀ချင်သလောက်ဝလို့ ပြောလို့ လား ”
“ ဘယ်က ငါ့ ချစ်ချစ်လဲ … ”
“ ဟယ်..နင့် ငယ်ကျွမ်းဆွေလေ ၊ ကျောင်းမှာကတည်းက တတွဲတွဲ မခွဲပဲရှိနေတာငါတို့ သိနေတာပဲ
ခုလက်ထပ်ပြီးပြီမှတ်လား ၊ ကလေးတွေရော ရနေပြီလား ”
“ ဘယ်ကလာ ဟန်နီရယ် ၊ သူ က ကျောင်းပြီးတော့ အရာရှိဖြစ်ပြီး နယ်မြို့ လေးတမြို့ ကို တာဝန်ကျရင်း အဲ့ ဒီမြို့ သူနဲ့ ပဲယူလိုက်တယ်လေ … ”
“ ဟယ်တော့ ..အဲလိုကြီးလား ၊ သူက ကြည့်တော့ ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ နင့်တယောက်ပဲချစ်မယ့်ပုံပါ ”
“ တရပ်ကွက်တည်းငယ်ငယ်လေးတည်းကခင်လာတဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေလေ..ဒါပေမယ့် သူ ငါ့ ကိုရက်စက်သွားတယ်ဟ..
ပြီးသွားပါပြီ ၊ ခု ငါ လည်း ကိုယ့်အိမ်အလုပ် ၊ဆိုင်အလုပ်တွေ နဲ့ ချာချာလည်နေတာ၊ နင်ရော ..တယောက်တည်းပြန်လာတာလား
နင့် ကောင်လေးရော ”
ဝေသွယ့်အမေးကြောင့် ဟန်နီငိုက ငိုချင်သလိုမျက်နှာနှင့် ..
“ သူ နဲ့ ငါ ပြတ်သွားပြီ ”
“ ဟယ်..ဘယ်လို ၊ နင် တို့ စင်္ကပူအတူတူထွက်သွားတာဖြင့် ကြာလှပြီ ၊ ခုမှ ပြတ်သွားတာလား ”
“ မဟုတ်ဘူး ၊ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲဟယ် ၊ ငါ သူ့ ကို ချစ်လွန်းလို့ငါ့ ဘေးဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေကိုကျော်ပြီး
ရွေးခဲ့တာ..သူ့ မှာ အရင်းအနှီးမရှိလို့စင်္ကပူအတူသွားဖို ငါ့အိမ်ကပိုက်ဆံတွေ နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာပါ ၊ခုတော့… ”
ဆက်မပြောသေး ဘဲ ဟန်နီက အံကြိတ်လိုက်ပါသည်။သူ့ မျက်နှာမှာလည်း ခံပြင်းနာကြည်းရိပ်တွေနှင့် ပါ..
“ သူ့ ကို ယုံခဲ့တဲ့ ငါ့အမှားပေါ့ ဟယ် ၊ ငါနင့် ကို ပွင့် ပွင့် လင်းလင်းပဲပြောပြမယ်…မြန်မာပြည်ပြန်လာမှ မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုပြီး
စင်္ကပူ မှာ ငါတို့ အတူနေခဲ့ ကြတာ ၃ နှစ်တောင်လေ ၊ နောက်တော့သူ ဖိလစ်ပိုင်မတစ်ယောက်နဲ့ ညိပြီး ငါ့ကိုထားသွားတယ် ၊ အတူနေတဲ့ တိုက်ခန်းကနေ လုံးဝထွက်သွားပြီးပြန်မလာတော့ဘူး… ဖြစ်ခါစကတော့ ခံစားရတာအရူးတပိုင်းပေါ့ ဟယ် ၊ ခုတော့လည်း တယောက်တည်း နေကျင့် ရနေပါပြီ ”
“ အို…အဲ့ လိုကြီးလား ၊ ဒါဆို နင် တယောက်တည်းကျန်ခဲ့ တာပေါ့”
“ ဟုတ်တယ်..ငါ တယောက်တည်းနေလာတာ ခုချိန်ထိပဲ ၊ ဒီတခေါက်တော့မြန်မာပြည် အပြီးပြန်လာတာ ၊ ဒီမှာလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်မလို့”
“ ငါ က ငါ့ ရည်းစား တခြားသူယူသွားတာဆိုးလှပြီထင်နေတာ..နင့် အဖြစ် ကပိုဆိုးနေပါလားဟန်နီရယ်၊ ယောင်္ကျားတွေ တော်တော် ယုတ်မာတာပဲနော် ”
“ အင်း…ယောင်္ကျားတိုင်းမကောင်းတာတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး ၊ ငါ့ ကံကြမ္မာကိုက ဒီလို ယောင်္ကျားနဲ့တွေ့ ဖို့ ပါလာတာ
နေမှာပါဟယ် …. ”
တွေးတွေးဆဆပြောနေတဲ့ ဟန်နီ့ ကိုကြည့်ရင်း ဝေသွယ့် ရင်ထဲ စာနာသနားစိတ်တွေ နဲ့ အရင်ထက်ပိုပြီးခင်လာမိ သလိုလို… ကိုယ်တယောက်တည်း ချစ်ကံခေတာထင်ခဲ့ပေမယ့်ဟန်နီ့ အဖြစ် က ဝေသွယ့် ထက်တောင်ဆိုးခဲ့တာပါလား ၊ သူတို့ နှစ်ယောက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ငြိမ်နေချိန်မှာ ထပ်ရောက်လာတာက ငွေမှင်ရောင်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ နေခြည်ပါ.. သုံးယောက်ဆိုတော့ စကားဝိုင်းက ပိုမြိုင်ဆိုင် လာပါသည်။
“ နေခြည်ရယ် ၊ နင်ပဲအေးတယ် ၊ နဂိုကတည်းက ယောင်္ကျားတွေကို အထင်မကြီးဘဲထပ်တင်းတင်းနေတာ၊
ငါတို့ နှစ်ယောက်လိုမျိုး ဒုက္ခတွေ နင် ခံစားဖူးမှာမဟုတ်ပါဘူး ”
သူတို့ ပြောတော့ နေခြည်ခပ်ယဲ့ ယဲ့ ပြုံးလိုက်ပါသည်။
“ မထင်ပါနဲ့ ဟယ် ၊ ငါလည်း ငါ့ သောက နဲ့ငါ ပါ ”
“ ဟင်..နင်ကရော ဘာတွေ ကြုံခဲ့လို့လဲ ”
“ ငါကတော့ လူမသိသူမသိ အသည်းကွဲခဲ့ရတာပါဟယ် ၊ လွန်ခဲ့ တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကပေါ့၊ ငါ နဲ့ တရုံးတည်းလုပ်တဲ့ ငါ့ ထက်ရာထူး တဆင့် နိမ့်တဲ့သူတစ်ယောက် နဲ့ ဆုံခဲ့ တယ် ၊ သူက ငါ့ ကို သိပ်ဂရုစိုက်တော့ငါလည်း သံယောဇဉ်တွယ်လာတယ် ၊ ဒီလိုနဲ့တရုံးတည်းအတူတူ အလုပ်လုပ်ရင်း သူ ဘယ်တော့ဖွင့်ပြောမလဲငါမျှော်လင့် ခဲ့တယ် ၊ သူ့ ကိုလက်ထပ်ဖို့ အထိ ငါ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့တာပေါ့ ”
“ ဒါနဲ့ ..နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ”
“ တကယ်တော့ သူကရည်းစားရှိပြီးသား ၊ ငါ့ ကို ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံတာ ၊အရေးပေးတာတွေက သူ့ အလုပ်စာမေးပွဲဖြေတာ အဆင်ပြေဖို့ငါ့ဆီက အကူအညီယူတာလေ ၊ ငါကလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က အစွမ်းကုန် ကူညီခဲ့တာပေါ့ ..၊ နောက်ဆုံးတော့ သူရာထူးတက်သွားပြီး သူ့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်သွားတယ် ”
“ ဟယ်..နင့် အဖြစ်လည်းတော်တော်ဆိုးတာပဲ ၊ အသုံးချခံရတာပေါ့”
“ ဟုတ်တယ် ၊ တကယ်တော့သူ့ အပြစ်ချည်းဘဲတော့မဟုတ်ပါဘူး ၊ငါ ကို က ယောင်္ကျားတွေ နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေဖူး တော့ သူ့ အပြောအဆိုတွေမှာ သာယာသွားတာလေ ”
“ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ..နင့်ကို တယုတယဆက်ဆံတာကိုကသူမြူဆွယ်တာပဲ ၊ယောင်္ကျားတွေများ တော်တော်မကောင်းကြတာပဲ”
ဝေသွယ် က ဒေါသတကြီးပြောတော့ ဟန်နီ ကလည်းထောက်ခံသည်။
“ ဟုတ်ပါ့၊ ငါ ကတော့ ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီးကိုနာသွားပြီ …ဒီတစ်သက်လည်း အ်ိမ်ထောင်မပြုဘဲ တစ်ယောက်တည်းနေသွားတော့မယ် ”
“ ငါလည်း ဒီလိုပဲတွေးထားတယ် ၊ နေခြည်..နင်ရော ”
“ ပြောနေဖို့ လိုသေးလားဟယ် ၊ အစတည်းက ငါ ယောင်္ကျားတွေကို အထင်ကြီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ၊ တယောက်တည်းနဲ့ ပဲမှတ်လောက်သားလောက်သွားပါပြီဟယ် ”
“ ဟုတ်တယ်..ငါတို့ မှာ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ တွေလည်းရှိတာပဲ ၊ ဘယ်သူ့ မျက်နှာမှကြည့်နေဖို့ မလိုဘူး ”
သုံးယောက်သားအတိုင်အဖောက်ညီနေချိန်မှာပဲ သရဖီရောက်လာပါသည်။ပန်းနုရောင် ပိုးပျော့ ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ သရဖီက သိမ်မွေ့ လှပနေသည်။အရင်ကထက်နည်းနည်းလေးပိုပြည့်လာကာ သူဌေးကတော် ပီပီသသခန့် ညားပါသည်။
“ ငါ နောက်ကျသွားတာ အားနာလိုက်တာဟယ် ၊ ကိုကို့ ကိုစောင့်နေရလို့ ပါ..သူ က ငါ့ ကိုအပြင်တွေတစ်ယောက်တည်းသွားတာ စိတ်မချဘူးလေ ၊ ခုလည်းသူ ကားမောင်းပြီးလို က်ပို့ တာ ၊ ပြန်ခါနီးဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့ ၊ သမီးနဲ့လာကြိုမယ်တဲ့၊ ငါ့ သမီးလေးက လေးနှစ်ရှိပြီ လေ ၊ သူပါလိုက်ချင်နေတာ ”
“ ဟုတ်လား ၊ နင့်သမီးလေးဆို ချောမှာပဲ၊ ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ”
“ ခေါ်ချင်တာ ၊ ကိုကို က မထည့်ဘူးလေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ ရအောင်တဲ့”
လေသံအေးအေးလေးနဲ့ ရှင်းပြနေတဲ့ သရဖီ့ကို သုံးယောက်သားအားကျတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ငေးကြည့်မိ သွားသည်။ သူတို့ မှာတော့ နှလုံးသားမှာ အနာတရတွေ ကိုယ်စီ နဲ့အချစ်ကံခေလိုက်ကြတာ ၊ သရဖီကျတော့ လည်း ဂရုစိုက်ကြင်နာတတ် တဲ့ခင်ပွန်းသည် ရဲ့ ပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့အရိပ်မှာ အေးချမ်းလှချည်လား…
“ ကဲ…လူစုံပြီဆိုတော့ အရည်အိုးဆူအောင် ဂက်မီးဖို ဖွင့် လိုက်တော့မယ် ၊ အရည်ကအချိုရည်နဲ့တုန့် ယန်းအစပ်ရည် နှစ်ကန့် လုပ်ထား တယ် ၊ နင်တို့ ကြိုက်တဲ့အရည်ထဲထည့် စားနော် ၊ငါကတော့ အစပ်ရည်ကြိုက်တယ် ”
ဟန်နီကပြောရင်း အစပ်ရည်အိုးထဲသူစားချင်တာတွေ ရွေးပြီးထည့်နေပါသည်။ဟော့ပေါ့ အိုးဆူလာပြီး စားရင်းသောက်ရင်း ပြောဆိုကြပေ မယ့် သရဖီ့ ကို အိမ်ထောင်မကျသေးဘူးဆိုတာကလွဲလို့သူတို့ သုံးယောက် ရဲ့ အကြောင်းတွေ ဘယ်သူမှမပြောမိပေ… သူတို့ ရင်ထဲမှာ ခင်ပွန်းနှင့် သမီးနှင့် ပြည့်စုံသာယာနေတဲ့ သရဖီ့ ကို သူတို့ ဘ၀အကြောင်းတွေပြောပြရမှာရှက်သလိုလို ၊ သိမ်ငယ်သလိုလို .... သရဖီကတော့နဂိုကတည်းက အနေအေးသူမို့ ဘာမှသိပ်မမေးဘဲ အေးအေးဆေးဆေးစားနေတုန်းသူ့ အမျိုးသား ဆီမှ ဖုန်းလာသည်။
“ ဟယ်လို ….ကိုကိုလား….ဟုတ် ၊ ဟော့ပေါ့ ကောင်းပါတယ်က်ိုက်ိုရဲ့၊ ဟုတ်… အချိုရည် နဲ့ ပဲစားတာပါ ၊ အစပ်ရည်မစားပါဘူး ၊ ဟုတ် …. စိတ်ချပါ … ဗိုက်မနာပါဘူး ၊ ဟုတ်…..”
တဟုတ်ဟုတ် နဲ့ဖုန်းပြောလို့အပြီးမှာတော့ သရဖီ့ မျက်နှာနည်းနည်းညိုနေပါသည်။
“ ကိုကို က အဲ့ လိုပဲ ၊ ငါ ဘာလုပ်လုပ် ပြန်ပြောပြရတယ် ၊ အရာရာ သူ့ စိတ်ကြိုက်နေနေရတာ ၊အစားအသောက်စားတာက အစ လိုက်ပြောတတ်တာ ၊ သူချစ်မှန်းသိပေမယ့် သိပ်ချုပ်ချယ်လွန်းတော့ ငါ လည်း စိတ်ညစ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူ ကအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုပြီး အလျှော့ပေးရတာပဲလေ ၊နင်တို့ တွေပဲအေးတယ်.. အိမ်ထောင်မကျသေးဘူးတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်သဘောပဲ ”
သရဖီ့ အပြောကြောင့်ခုန က ညှိးနေတဲ့ သူတို့ သုံးယောက်မျက်နှာတွေ ပြန်လန်းလာပါသည်။
“ အေးနော် ၊ ငါ လည်းသရဖီ့ လို ဆို စိတ်ညစ်မှာပဲ ၊ အပျိုကြီးလုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဟန်နီရယ်၊နော့ ”
ဝေသွယ့်အပြောကို နေခြည်နဲ့ ဟန်နီ ကလည်းအားတက်သရောထောက်ခံရယ်မောမိသည်။သူတို့ ရင်ထဲမှာလည်း ခုန က သရဖီ့ ကို အားကျသလိုလို ၊ မနာလို သလိုလို ဖြစ်မိတဲ့ စိတ်လေးလည်းပျောက်သွားပါသည်။သရဖီကတော့ သူတို့ ဖြစ်နေတာတွေ သတိမထားမိဘဲ ပြန်ခါနီးတော့ အမျိုးသားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ရသည်။
သရဖီ့ သမီးလေးနဲ့ သူ့ အမျိုးသား ရောက်လာတော့သူတို့ သုံးယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။သရဖီ့ ကားလေးထွက်သွားတဲ့ အထိ ငေးကြည့်နေပြီးမှ သွယ်ကပဲဟန်နီ့ ကို ပြောလိုက်သည်။
“ ဟန်နီရေ ၊ နင်ဘယ်လိုထင်လဲဟင် ”
“ ဘာလဲဝေသွယ်ရဲ့”
“ အော်..တို့ ဘ၀တွေ နဲ့သရဖီ့ ဘ၀လေ ၊ ဘယ်ဘ၀ က ပိုကောင်းလဲဟင် ”
“ အို…အသိသာကြီးပဲလေ ၊ ခုငါတို့ က ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေနေရပြီး သရဖီ့ ခမျာသူ့ အမျိုးသားချုပ်ချယ်တာ ခံနေရတာ ၊ စားချင်တာမစားရ ၊ သွားချင်တာမသွားရနဲ့”
“ အင်း..ဟုတ်တယ် ၊နေခြည်ဆိုလည်း အဲ့ လို လုပ်ရင်သည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ၊ တို့ ဘ၀တွေပဲကောင်းပါတယ်ဝေသွယ်ရယ် ”
“ ဟုတ်တယ် ၊ ငါတို့ ဘ၀တွေ ကအကောင်းဆုံးပဲ နော် ”
ဝေသွယ့် စကားအဆုံးမှာ တိုင်ပင်ထားသလို ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောနေကြတဲ့ သူတို့ သုံးယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာတော့...
မျက်ရည်စလေးတွေက မသိမသာဝဲလျှက် .........။
အဖော်ညှိတတ်ကြသူများကို နားလည်စာနာစွာဖြင့် 
Women`s World Journal Oct 2,2013